Ukufakwa phansi kwe-SPC kuholela emfashinini ekhaya, kungabe kusakhathazwa ngokhuni phansi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ukufakwa phansi kwe-SPC kuholela emfashinini ekhaya, kungabe kusakhathazwa ngokhuni phansi
Ukufakwa phansi kwe-SPC kuholela emfashinini ekhaya, kungabe kusakhathazwa ngokhuni phansi
Hlela: UDenny　2020-01-20　Iselula
Ukwebiwa phansi ngokhuni kuyinto yokuqala yokucabanga abantu abacabanga ngayo, ngoba isuselwa ezintweni zokwakha eziqinile eziphezulu, ingaphezulu lezinkuni lihle, futhi umbala ufudumele. Phansi. Kodwa-ke, kunezinkinga ezingenakugwemeka ngamatshe wokhuni!
1. Izindleko ziphakeme, izihlahla zidinga ukuxoshwa, futhi imvelo yemvelo ilimele kakhulu.
2. Ukubeka phansi okuhlanganayo okulinganiseli okulinganiselwe kanye nokubekelwa phansi kwamalitha nakho kunezinto ezinobungozi njenge-formaldehyde ne-xylene.Noma zingafinyelela amazinga, akusho ukuthi azikho futhi zizolimaza imizimba yabantu isikhathi eside.
3. Lapho imvelo yangaphakathi inomswakama kakhulu noma yomile, kulula ukubopha, ukuqina, ukuqina, isikhunta nokubola.
4. Izidingo zokwakha ziphezulu, umjikelezo mude, kanti ukugandaya akukuhle, okuzobangela uchungechunge lwezinkinga.
Isikhathi eside, abantu badinga induduzo yokwehla kwamapulangwe, futhi ngasikhathi sinye, akumele bathwale hhayi kuphela izinkinga ezingenhla.Uphansi olusanda kufakwa phansi luzojabulisa abantu, kepha ngokuhamba kwesikhathi, lezi zinkinga ezingenhla ziba yinkinga.
Kusuka kwigumbi lokuqala elilukhuni kuya kwigumbi lesembozo esinamandla, kusukela ekudalekeni kobumba, izitini zamatshe, usimende, upende, isikhumba sangaphansi, amathayela wangaphansi, phansi, phansi, namathayela e-ceramic, abantu banezidingo zomhlaba eziphakeme kakhulu zendawo yokuhlala, kanye nomhlobiso wezinto zokwakha umhlobiso Iphinde yashintsha nezikhathi futhi yema isuka ekugcineni. Yize amaflethi enziwe ngamapulangwe abekhona iminyaka eminingi, izinkinga zisobala. Eminyakeni engama-70 yezinto ezisezingeni eliphansi zaseYurophu naseMelika ezimelela isizukulwane esisha semfashini nemfashini, izinto ezivelayo eziguqukayo zobuchwepheshe nokuvikela imvelo zisetshenziswa kabanzi ekuhlobiseni kwasekhaya nasekugqokeni komphakathi. Phakathi kwazo, ukubeka phansi kwe-SPC kwaqala ukufaka esikhundleni sokwendlalelwa kwendabuko ngezinzuzo eziningi njengokuvikelwa kwemvelo, ukuqina nokuqina, futhi yasheshe yathandwa ngabathengi.
Izinto zokwenziwa ezingafuneki zesakhiwo se-SPC yi-PVC (i-polyvinyl chloride resin) ne-itshe powder (i-calcium carbonate). I-PVC iyimithombo evuselela imvelo futhi engenabuthi obunobuthi. I-Stone powder iyenzeka ngokwemvelo.Ingu-100% wamahhala we-formaldehyde, azikho izinsimbi ezisindayo kanye nama-carcinogens, futhi azikho izintetheli. , Izinto zokwelapha ezinemvelo ezingenayo imvelo.
Iphansi le-SPC lingabekwa ngokuqondile emhlabathini oyisicaba njengophahla lukakhonkolo, isitezi esidala, i-floor floor, i-ceramic tile, njll. Ukusebenziseka okuhle kakhulu kuyenza isetshenziswe ngokushesha ekuvuseleleni izindlu okusha nasendlini endala yokuvuselela indlu.
I-SPC ayisebenzi kuphela ngaphezu kwalokho okokubekwa phansi ngokhuni, kodwa futhi inezinkuni ezifanayo zokufakelwa okufana nokufekethisa phansi kwe-laminate, futhi ukuthungwa kwayo kungcono kunokwakha phansi kwe-laminate.
Njengamanje, kunezimakethe eziningi ze-SPC zokubeka phansi, ezinesiphithiphithi futhi zinomehluko omkhulu ngekhwalithi. I-Kingup SPC super floor idlulise isitifiketi sokuvikelwa kwemvelo kwe-SGS yamazwe omhlaba, yenqaba ukuphinda isebenzise izinto zokwakha, yenqaba izengezo ezinamandla zensimbi, futhi yathunyelwa kwamanye amazwe emazweni angaphezu kwezi-30.
Imithi ephezulu yokugqokwa, engagxili futhi engangeni manzi, iminyaka eyi-10 ubude kunephansi lokhuni
Ukuxhumeka kokukhiya okungenasisekelo kwephansi le-SPC kungakhombisa umqondo wokusanhlamvu kwezinkuni ngasikhathi sinye, futhi kulula ukuwahlanza ngaphandle kwamabala.
Ukuvikelwa kwemvelo nge-zero formaldehyde, ukubuyiselwa kwentaba okunethezekile, kanye nokwenza ngcono eminye indawo yokuphila
I-moisture-proof kanye ne-anti-bacterial, okwenza phansi kwe-SPC kulungele kakhulu izindlu ezi-villas, izindlu, njll.
Iphansi le-SPC limi ngezinto zokwakha umhlobiso wezobuchwepheshe emfashinini, lingakhuphuki emhlobisweni wasekhaya kuphela, kepha libuye lisetshenziswe kakhulu ezinkulisa, ezibhedlela, emahhovisi, emahhotela, emigoqweni nakwezinye izindawo.
Ukufakwa phansi kwe-SPC kuholela emfashinini ekhaya, kungabe kusakhathazwa ngokhuni phansi Okuqukethwe okuhlobene
Kuyini phansi kwePVC Ngokusho kwesakhiwo, i-PVC flooring ihlukaniswe izinhlobo ezintathu: uhlobo lwenhlanganisela olunezinhlaka eziningi, uhlobo lwenhliziyo enenhliziyo eyodwa nohlobo lwehomogeneous....
Manje abantu abaningi babiza ukufakwa kwamapulasitiki okufulela nge-PVC. Eqinisweni, leli gama alilungile.Obabili bahlukile, hhayi umkhiqizo ofanayo. Eqinisweni, izitezi zepulasitiki ngokuvamile zenz...
Yini impahla eluhlaza yokugcwala phansi kwe-spc?
Iphansi le-SPC lakhiwa kakhulu i-calcium powder ne-polyvinyl chloride stabilizer engxenyeni ethile yokwenza izinto ezihlanganayo zephansi. Ingabe into entsha, ephansi ye-SPC engaphakathi. Iphansi le-...
Kuyini i-spc floor?
Iphansi le-SPC lakhiwa kakhulu i-calcium powder ne-polyvinyl chloride stabilizer engxenyeni ethile yokwenza izinto ezihlanganayo zephansi. Iphansi le-SPC lisebenzisa i-calcium powder njengezinto eziy...
Uyini umehluko phakathi kweWPC nePVC floor?
I-WPC isho izinkuni ezakhiwe ngamapulasitiki, izinkuni zepulasitiki zokhuni. Zingenziwa ngePVC / Pe / PP + ipoda. I-PVC yipulasitiki ye-polyvinyl chloride, futhi ukufakwa phansi kwePVC okujwayelekile...
Ungagxibha kanjani phansi
Umbala kanjani phansi
Yini okufanele uyenze uma floor imifantu
Izintela ezikhokhwayo zase-U.S, zikhiya izingxabano zobunikazi
Kuyini ukuzilinganisa usimende?
Yini okufanele ngiyinake ekuhambeni kwebusika kwefasitela le-PVC ebusika?
Amaphuzu ambalwa adinga ukunakwa ekwakhiweni kwephansi ebusika bePVC